Sida loo geliyaan VOB Videos in YouTube Effortlessly
> Resource > Video > Sida loo geliyaan VOB Videos in YouTube
Waxaa laga yaabaa in aad leedahay badan oo files VOB, uruuriyaa softcopy ama DVD uruuriyaa jirka. Haddii ay sidaas tahay, waxaa jira fursado ah in aad rabto in aad geliyaan files kuwaas VOB in YouTube wadaaga dadka kale. Si kastaba ha ahaatee, VOB ma aha mid ka mid ah qaabab video in YouTube jecel yahay ee. Waa hagaag, sida loo wadaagi VOB on YouTube si guul ah? Taasi waa mawduuca qoraalkan, waxaad muujinaya guys sida loo VOB geliyaan si ay u YouTube effortlessly by diinta video.
Waayo, kanu, a video Converter weyn waa lagama maarmaan kaa caawin kara in aad loogu badalo VOB in YouTube taageeray qaabab. Halkan, si adag ayaan ku talin Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Waxaa jira labo sababood oo muhiim ah in aan isticmaalo app this. Mid ka mid ah waa barnaamijkan taageertaa labada VOB files softcopy iyo DVD (.vob) files. Midda labaadna waa horena u filaayo in YouTube ay bixiyaan app this. Just doorataa horena la mid click, waxaad si deg deg ah loogu badalo karo files si aad u qaab wanaagsan ee YouTube.
Next, qodobkan wuxuu idin tusin tallaabooyinka faahfaahsan oo ku saabsan madal Windows. Dadka isticmaala Mac, hawlgalka ku dhowaad waa isku mid sida in Windows.
1 Import VOB files si VOB si Converter YouTube
Ka dib markii aad furto barnaamijkan, waxaad uun jiidi oo hoos u files VOB aad ka your computer xagga daaqaddii barnaamijkan ee diinta video. Si kale waa in guji badhanka Add Faylal ay ku interface ugu weyn this app ee, ka dibna suuqa kala pop-up aad keeni doontaa in ku shuban videos HD aad rabto in aad ka PC. Wixii DVD files, waxaad u baahan tahay in la garaaco button DVD Load si ay u dajiyaan.
Fiiro gaar ah: Haddii aad u baahan tahay in aad xaalkaa videos ka hor inta in YouTube, sida falinjeeerka, qoqobada, lana siii, isagoo intaa ku daray watermark ama faylasha Cinwaan iwm, waxaad riix doorasho Edit ku saabsan mid ka mid ah baararka video item.
2 Dooro qaab ku habboon YouTube
Si aad u doorato qaabka filaayo in YouTube in ay suuqa kala qaab wax soo saarka, kaliya aad u tagaan si ay leeg- Qaabka Output ee suuqa kala ah, ka dibna la furo halkan liiska qaab hoos-hoos, soo socda, si ay u tagaan qaab> Web> YouTube.
Fiiro gaar ah: Haddii aad u baahan tahay si ay u dejiyaan qaar ka mid ah koobin video sida xal video, heerka yara, heerka jir, iwm, riix ikhtiyaarka Settings hoose ee suuqa kala loo sameeyo shaqadan.
3 Beddelaan files Vob in YouTube
Ka dib marka aad riixdid batoonka badalo on geeska hoose ee saxda ah ee suuqa kala ah, aad arki doonaa bar horumarka diinta iyo markii ugu harsan kasta bar video item. Muddo ka dib, dhammaan videos daray jeesan. Wakhtigan, aad u baahan tahay in guji ikhtiyaarka Folder Open hoose ee suuqa kala this si ay u helaan, kuwaas oo files gediyay.
Hadda, waxaad gali kartaa faylasha wax soo saarka si ay u YouTube sida aad uploaded videos in YouTube ka hor.
Sida loo geliyaan HD Videos in YouTube
Sida loo geliyaan wmv YouTube in Effortlessly
7 Talo in iibso laxamiistaha Media AVID ee Price Low
Sida loo dhiso Tababarka Software Video
Sida loo sameeyo Montage Wedding la Photo iyo Video ah